एसपीहरुको सरुवा, को कहाँ परे ? - Everest Dainik - News from Nepal
एसपीहरुको सरुवा, को कहाँ परे ?
काठमाडौं, वैशाख १७ । नेपाल प्रहरीका चार जना उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा भएको छ । सोमबार प्रधान कार्यालय नक्सालले चार एसपीको सरुवा गरेको हो ।
धादिङ, सुनसरी, सिरहा र मकवानपुर जिल्लाका एसपीको सरुवा भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा रहेका एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठलाई प्रहरी प्रमुख बनाएरसिरहा सरुवा गरिएको छ।
त्यसैगरी, एसपी डम्बरबहादुर विकलाई धादिङ, लोकेन्द्र श्रेष्ठ मकवानपुर र राजन अधिकारीलाई सुनसरी सरुवा गरिएको हो।
ट्याग्स: Nepal police, SP